Abavelisi beelebhile zesikhumba china ababoneleli kunye nabathengisi | Eco Ubomi
Igama lemveliso Amachaphaza eelebhile zesikhumba
Umbala, imilo kunye nelogo Wamkelekile ngentando, Vumela iLogo yakho yahlukile.
Ubungakanani Ngokwesiqhelo Sebenzisa ubungakanani, Yenza ubungakanani obuTyunjiweyo ukuThelekisa iiMveliso zakho.
Izinto eziphathekayo Isikhumba sokwenyani, isikhumba se-PU, i-Suede, i-Felt njlnjl. Zonke zinobuhlobo be-Eco, impilo elungileyo yeyona ilungileyo.
Uyilo kunye neNgcebiso Uyilo lwaSimahla kunye neNkxaso yeZakhono, Beka iZimvo zakho ezilungileyo kwiNyaniso.
Iitekhnoloji Ukunyathela eshushu, ebhalwe okanye Ulahle iimpahla, ukuhombisa, Ishicilelwe njl Ingcali yethu, Ukoneliseka kwakho.
Ukusetyenziswa Ukusetyenziswa ngokubanzi kwengubo, ijeans, iithoyi, izihlangu, iingxowa, iminqwazi, ifanitshala, Impahla yekhaya njl
Iphakheji Ngokwesiqhelo ii-PC ezili-100 kwi-PP Bag okanye kwibhokisi encinci, Yamkela iimfuno zakho ezizodwa, masigcine ixesha kunye neenkxalabo.
MOQ I-MOQ esezantsi yokuPhepha iNkunkuma engeyomfuneko yeeMveliso zakho kunye neMali, hayi ngaphantsi kwe-PC ezili-100.
Iindleko zesampulu Simahla Sample Iindleko. Ngokwesiqhelo i-USD 35 ~ 55 ngesimbo ngasinye ukuba uyilo olukhethekileyo sifuna isampulu yokutshaja, ngaba unokubuyisa imali xa une-odolo esemthethweni.
Ixesha lesampula kunye nexesha elininzi Ixesha leSampula elijikeleze iintsuku ezi-3-5 zokusebenza; Ixesha lobuninzi malunga neentsuku ezi-5-7 zokusebenza.Yenza into oyifunayo, Cinga ngoKhathalelayo.
Immimiselo yokuhlawula Kuphela yi-30% yediphozithi, Yenza ukuba iXabiso lakho eliDadayo liSebenze ngakumbi.
Ukuhambisa ngenqanawe Ngomoya okanye uLwandle. SiliQabane elikwiNqanaba eliphezulu leKontrakthi le-DHL, i-Fedex, i-UPS kunye nezinye iiNkampani zeZizwe ngeZizwe. Yenza Iimpahla ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo nangeNdleko ephantsi yokuFikelela kwizandla zakho.
Incwadi, Iilebhile zesikhumba ezikrolwe ngeLaser, zibhalwe,
Sinikezela embossed, debossed, laser-oqingqiweyo, isilika screen eshicilelweyo, kunye nezimfakamfele ezimfakamfele yesikhumba neelebhile. Akukho mda kwiindidi zeepatches kunye neelebhile esinokukuvelisela zona, sinceda ukuthatha umgca wakho wempahla uye kwinqanaba elilandelayo. Sisebenzisa izakhono zethu namava, sivelisa iilebhile zesikhumba kunye neepatches nakweyiphi na imilo, umbala, okanye ubungakanani, sizisa imibono kunye nemibono ebomini.
Senza iilebhile zesikhumba ukuze zihombise naziphi na izinto ezinxitywayo
Amachaphaza esikhumba kunye neelebheli sisiqwenga sesitetimenti, esinika uphawu lwempahla yakho kwindawo ekhethekileyo enokuchazwa ngokuthe cwaka nangokuthetha ngomgangatho. Sebenzisa iindlela ngeendlela kunye nemibala, zinokwenziwa ukuhombisa nawaphi na amanqaku ezinto zokunxiba. Iimpawu zesikhumba kunye neelebhile zinokuthatha nayiphi na ingqokelela kwaye zinike ukuziva koyilo. Imathiriyeli yesikhumba yokwenene yemveli iza ngemibala yendalo enje ngombala omnyama, omdaka kunye nomdaka, iisuede kunye nezinto zokwenziwa (izinto ezingezizo) zikunika indlela yokusebenzisa phantse nayiphi na imibala ngaphandle kokuphulukana nomgangatho. Iipateni zesikhumba kunye neelebheli zinokuprintwa, zifakelwe ezimfakamfele, okanye zenziwe nge-embossed, ngembonakalo eyahlukileyo elingana nawuphi na umgca wempahla kunye noluhlu lwamaxabiso.
Egqithileyo Eyelet kwisixhobo esitalini
Okulandelayo: Iqhosha le-Orthodontic Lingual / iqhosha le-denim / iqhosha le-shank
I-Zinc Metal Lace Cord End Stopper Tshixa
Iifashoni zeLaser zeLaser eziKroliweyo zeWood Button ...